Ukunethezeka nokuthula phakathi kweNdalo
Piracaia, São Paulo, i-Brazil
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Pamela
Indlu isesifundeni saseDobrada, ekugcineni komgwaqo ozimele, phakathi kwemvelo ejabulisayo futhi kuphela amakhilomitha ayi-6 ukusuka enkabeni yePiracaia/SP. Indawo inekamelo lokulala, igumbi lokugezela, igumbi lokuphumula, ikhishi, igaraji kanye negceke elikhulu elingemuva. Kuyindawo yokuhlala elula nejwayelekile yalabo abafuna ukuxhumana nemvelo endaweni ephephile nejwayelekile.
Eduze kunechibi elikhulu lokudoba kwezemidlalo elingasetshenziswa lapho ubhukwa.
Indlu elula futhi evulekile enomuzwa we-cabin. Igceke elingemuva likhulu kakhulu futhi libiyelwe ngokugcwele, elinikeza ukunethezeka nobumfihlo, okuvumela izivakashi ukuthi zilethe izilwane ezifuywayo zizogijima futhi zithathe ilanga elimnandi. Yonke indawo ezungezile yendlu izungezwe izinkuni, amadlelo, izinsimu zezithelo noma izintaba. Indawo ejabulisayo ukuchitha izinsuku ezimbalwa uphumule noma usebenza ukude.
I-Bairro da Dobrada itholakala phakathi kwezintaba ezinhle zasePiracaia futhi iseduze kakhulu "nezingalo" ezimbalwa ze-Represa do Jaguari. Kuqhele ngamakhilomitha ayi-6 kuphela ukusuka enkabeni yedolobha, isifunda siyikhaya lamakhondomu amaningana futhi siba nokugodola okujwayelekile nokumnandi kusihlwa.
Sou natural do interior de São Paulo e atualmente vivo em Bragança Pta. Gosto de estar perto da família e em contato com a natureza.
Indlu iseduze kwendlu yabazali bami, abazokwazi ukubasiza futhi baphendule imibuzo mayelana nesifunda.
Hlola ezinye izinketho ezise- Piracaia namaphethelo